Nimanka Ka Dagaalamaya Dhuusa Mareeb Waa La Yaqaanaa, Waa Qab qablayaashii Shabeelada hoose Looga Soo Adkaaday” - iftineducation.com
iftineducation.com – Sheekh Cabdi rashiid oo kamid ah Saraakisha ahlusunna ayaa shegay dadka dagaalka ka qarxiyeey Dhuuso mareeb ay kamid yihiin kuwii horey dagaalka uga abuuray Gobalka shabeelaha Hoose.
Xlli uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu nasiib xumo ku tilmaamay dagaalada ka dhacay gobolka galgaduud gaar aha degmada dhuusa mareeb.
“Nimanka ka dagaalamaya Dhuusa mreeb waa la yaqaanaa waa qab qablayaashii Shabeelada hoose looga soo adkaaday,cirfo ayaa kamid ah,meeshaan waa deegaankoodii iyo dhulkoodii marki hore ahlu sunna ayaa gacan ku heysay,nmarkii shabeelada hoose ay ku guuleysan waayeen ayay bilaabeen in ay xoog wax kaga raadiyaan galgaduud waxaana garab siiyay rag ahlu sunna ka tirsan”Ayuu yiri wadaadkaan kamid ah ahlu sunna waljamaaca.
Waxa uu shacabka ugu baaqay sida uu yiri in ay wax garadku u istaagaan nabadeeynta deegaanadaasi isla markaana la iska ilaaliyo waxa uu ku tilmaamay hogaamye kooxeedyo.
“Waxgaradka waxaan ugu baaqayaa in ay u istaagaan nabadeynta dhuusa mareeb si shacabku ay nabad u helaan la iskana ilaaliyo hogaamiyo kooxeedyada maamul doonka ah”Ayuu yiri sheikh cabdi rashiid oo kamid ah Ahlu sunna waljamaaca.
Daawo Muuqaal Dhalinyaro Yurub ka tagay kuna biirtay Daacish oo Baasabooradooda gubaya & Qaarkood oo la maxkamadeeyay.